Horoscope – Myanmar
”ရုတ်တရက် မြင် လိုက် တာနဲ့ ချက်ချင်းသိ သွားနိုင် မယ့် အလျှံ အပါယ် ချမ်းသာကြွယ်ဝသူ ရဲ့ လက္ခဏာ ပုံစံ”
မူရင်း လက်ဝါးပုံကိုပါ တစ်ခါတည်း တွဲတင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ လက်သူကြွယ် အောက် အဖြူရောင်ဖြင့် ဝိုင်းပြသည့်ထဲကြည့်ပါက “ငါးရုပ်သင်္ကေတပုံ´´ထင်ရှားပြတ်သားစွာ မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ ထို ငါးရုပ်သည် လက်ဝါးပြင်၌ မည်သည့်နေရာ၌ ရှိရှိ ကောင်းကျိုးမင်္ဂလာကို ပေးပါတယ်။ အခုပုံ လက်သူကြွယ် အောက်ရှိငါးရုပ်သည် မှန်ဘီလူး ဖြင့် ကြည်စရာ မလိုပဲ […]
လက်သန်းလေးကသိနိုင်တဲ့ သင့်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား သင့်ရဲ့လက်သန်းပုံစံကဖော်ပြနေသော သင့်အကြောင်းများ လူတစ်ယောက်ရဲ့လက်ဖဝါးက သူ့ဘဝ အကြောင်းတွေနဲ့များစွာပတ်သက်နေလေ့ရှိတယ်လို့ ခေတ်အဆက်ဆက် ပညာရှင်တွေက ယုံကြည်ခဲ့ ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ိဆီမှာလည်း လက္ခဏာ ပညာရပ်က ထင်ရှားတဲ့ပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သင့်လက်က ဘယ်အမျိုးအစားထဲမှာ ပါမလဲဆိုတာ ကြည့်ပြီးရင် အဖြေတွေကို တစ်ပုံချင်းစီမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ မြိုသိပ်လွန်းသူ […]
2020 နှစ်ကြီးကလည်း တဖြည်းဖြည်း ကုန်ဆုံးဖို့ နှစ်လလောက်ပဲ လိုပါတော့တယ်နော်။ ဒီတော့ နှစ်သစ်မှာ ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လိုကံကောင်းခြင်းမျိုးတွေက စောင့်ကြိုနေမလဲဆိုတာကို အားလုံးက မျှော်လင့်မိကြမှာပါ။လာမယ့် 2021 မှာတော့ ရာသီခွင်အားလုံးထဲမှာ ကံကောင်းခြင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ရာသီခွင်တွေ ရှိလို့နေပါတယ်နော်။ကဲ ဘယ်လိုရာသီခွင်တွေက ဘယ်လိုကံကောင်းခြင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားလဲဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတော့ … […]
သင့်မှာ ဘာလမ်းကြောင်းလေးတွေ ပါလဲ
သင့်ရဲ့လက်မှာ ဘာလမ်းကြောင်းလေးတွေ ပါလဲဆိုတာကို ရှာကြည့်ရအောင်နော်။ ၀၁. ဒီလမ်းကြောင်းလေးကတော့ အသက်လမ်းကြောင်းကနေ ဆက်ပြီးရှည်ထွက်လာတဲ့ လမ်းကြောင်း လေးပါ။ ဒီလမ်းကြောင်းလေးပါရင်တော့ သင်ဟာ ကံအလွန်ကောင်းသောသူဖြစ်ပြီး အခြားသောသူတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်ပြီး အရာရာမှာအောင်မြင်သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ၀၂. ဒီလမ်းကြောင်းလေးကတော့ အိမ်ထောင်ရေးကံကောင်းသူဖြစ်မှာပါ။ ဆိုလိုတာက သူဌေးသား၊ သူဌေး သမီးနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပါလိမ့်မယ်။ ၀၃. […]
အိုဇာ တာ ကောင်း / မကာင်း (လူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးပါတယ်)
စပါးစေ့လို သေး ချွန် ပြီး ပိတ်နေ ရင် အိုဇာ တာ ကောင်းပါတယ် မိမိ ရှာသည်ဖြစ်စေ သူတစ်ပါး ကူညီသည် ဖြစ်စေ ပြည့်စုံပြီး မပူပင်ရပါ စပါးစေ့ပုံမဖြစ်ပဲ ဟ နေရင် မျဉ်းပြိုင် ဖြစ်နေရင် ဆင်းရဲချမ်းသာမဟူ မိမိ က ရှာ […]
ဂမ္ဘီရ ကြက်ခြေပါ သူများအတွက်…. ဂမ္ဘီရ ကြက်ခြေပါရင် အရာရာ ကြီးပွား ပြည့်စုံမယ်
ဂမ္ဘီရ ကြက်ခြေပါ သူများအတွက်…. ဂမ္ဘီရ ကြက်ခြေပါရင် အရာရာ ကြီးပွား ပြည့်စုံမယ် လက်ခဏာ ပညာနှင့်ဘဝကံဆက်စပ်နေပုံ) ဂမ္ဘီရကြက်ခြေ [သို့] နာနာ ဝိဇ္ဇာသယကြက်ခြေ The Mysterious Cross sign ဂမ္ဘီရ ကြက်ခြေ ပါသူများ အတွက်… ဒီမနက်လဲ နံနက် (၁-၀၀)လောက် […]
သင်္ကေတတွေက ပြောပြမယ့် သင့်အနာဂတ်အတွက်ဗေဒင် မရွေးချယ်ခင်မှာ စိတ်ကိုငြိမ်အောင် ခဏထား၊ပုံတွေကို သေ ချာတစ်ခုချင်းစီကြည့်ပြီးမှ စိတ် ကြိုက်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ဖို့ အကြံပြုပါရစေ
သင်္ကေတတွေက ပြောပြမယ့် သင့်အနာဂတ်အတွက်ဗေဒင် မရွေးချယ်ခင်မှာ စိတ်ကိုငြိမ်အောင် ခဏထား၊ပုံတွေကို သေ ချာတစ်ခုချင်းစီကြည့်ပြီးမှ စိတ် ကြိုက်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ဖို့ အကြံပြုပါရစေ (1)နံပါတ်တစ်သင်္ကေတကို ရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချိန်ဟာလက် လွှတ်ပေးလိုက်ရမယ့်အချိန်ပါ။ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းလောက် နောက်ပြန်ဆုတ်နေလိုက်ပါ။လမ်းကြောင်းမှန်တစ်ခုဆီကို သင့်ကို ခေါ်ဆောင်သွားပေးမယ်ဆိုတာကို စိတ် ထဲက နေယုံကြည်ထားပါ။ရည်မှန်းချက်တွေဆီရောက်အောင် တိုက်ပွဲဝင်ပြီး အရောက် သွားချင်နေတယ်ဆိုတာ […]
နာမည်ကိုသိရုံနှင့် စိတ်ဓါတ်ကို သိနိုင်အောင် တွက်နည်း
သင့်ရဲ့ နာမည်ကို ကြည့်ပြီး သင့်ရဲ့ စိတ်နေ သဘာဝ ကို အကြမ်းဖျင်း တွက် လို့ ရတဲ့ နည်း ရှိတယ်။ သင့်ရဲ့လူသိများသောအမည်ကိုအောက်ပါအတိုင်းတွက်ပါ။ အ-အာ-ဥ-ဩ-ဧ = ၁ က-ခ-ဂ-ဃ-င. = ၂ စ-ဆ-ဇ-စ်-ည. = ၃ ယ-ရ-လ-၀. = […]
သင်ရွေးချယ်သင့်ကဒ်က ပြောပြမည့် သင့်အကြောင်း #1 ဒီကဒ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ရင် သင်ဟာ နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား ရှိတဲ့သူပါ။ သင်ဟာ အလှအပကို အရမ်း ချစ်မြတ်နိုးပြီး သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ သင့်ကိုသင် ဝန်းရံထားချင်သူပါ။ ထုံးတမ်း အစဉ်အလာတွေနဲ့ အတိတ်က အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း သင် အလေးထား တတ်ပါတယ်။ […]
ဒီ လို လက္ခဏာပိုင်ရှင် များ ဟာန ယ်နယ်ရရ တော့မ ထင်လိုက်ပါနဲ့ သင့်ဘေးမှာ ရှိနေရင်တော့ ဆွဲထားလိုက်ပါ
ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ရှင်များဟာနယ်နယ်ရရတာ့မထင်လိုက်ပါနဲ့ ပါရမီရှင်တွေပါ သာမန်လူပိန်းတွေအလိမ်ခံနေရတာသိသလိုအနာဂတ်ဖြစ်မည့်အရာတွေကိုကြိုတင်တွက်ဆနိုင်သူများပါ အဲဒီလို X သင်္ကေတပါတဲ့ လက္ခဏာပိုင်ရှင်ဟာ ကြီးပွားချမ်းသာပြီး အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်တက်တယ်။ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ မချမ်းသာသေးရင်လည်း ကြီးလာတဲ့အခါမှာ ပြည့်ပြည့်စုံနေရတက်ပါတယ်၊ နောက်ဆဌမအာရုံလိုခေါ်တဲ့ အကြားအမြင် ရတက်တယ်။ ဘယ်သူတွေကိုယ်အပေါ်ဘယ်လိုဆက်ဆံတယ် ချက်ချင်းသိတယ်။ ဒါပေမဲ့ မသိသလိုနဲ့ အသာလေး နေတတ်တယ်။ အကြီးအကဲ ဖြစ်တက်တဲ့သူတွေမို့ အခက်ခဲတွေ […]